Iyo Google Chrome webhu bhurawuza yakagadziridzwa 63.0.3239.84 | Linux Vakapindwa muropa
Google Chrome bhurawuza rakagadzirwa neruoko rwevagadziri veGoogle, Google iyi yakavhurwa sosi uye muchinjika-chikuva browser yakagadziriswa kuburikidza neakasiyana matekinoroji uye iyo blink inopa injini.,
Zvakanaka uye ndizvozvo munguva pfupi yapfuura Chrome browser yakagadziridzwa kune yayo nyowani vhezheni 63.0.3239.84 mune iro timu yaro yekusimudzira iri kufara kuzivisa kuti mumazuva mashoma ichave ichiwanikwa mune yayo yakagadzikana vhezheni.
Iyi vhezheni nyowani inouya nekugadzirisa kwakawanda uye kugadzirisa, kunyanya tinogona kuwana izvo zvitsva mune ino gadziriso muChannel uye Chromium.
Iyi yekuvandudza inosanganisira makumi matatu neshanu ekuchengetedza. Tevere, tinoratidzira mhinduro dzakapihwa nevanoongorora vekunze, idzo dzinoverengeka dzaive dzakakomba zvakanyanya, yekupedzisira yakapihwa madhora zviuru gumi nemazana mashanu kune akaiwana.
Mune ino vhezheni nyowani yeGoogle Chrome isu tinobvumidzwa kuziva zvishoma zvishoma nezve ruzivo nezve zvitupa zvinoshandiswa pawebhusaiti dzeHTTPS.
Kune avo vanoda kumisikidza beta mabasa ebrowser isu tinonyora chete chrome: // flags mune kero bar yebrowser uye pano isu tichawana peji neese kuyedza, yekuyedza mabasa uye nevamwe.
Sezvo zvagara zvichingove, bhurawuza iri multiplatform saka inowanikwa yeLinux, Mac uye Windows, kuwedzera kune yayo vhezheni yemafoni nhare.
Kana iwe uchida kugadzirisa yako browser, ingo nyora mubara rekero Chrome: // pazviruva / rubatsiro uye tarisa kuwanikwa kweshanduro nyowani, kune rimwe divi kana uchinge usina browser rakaiswa isu tinongofanirwa kurodha pasi yakaratidzwa package yeedu system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ndakavandudza iyo Google Chrome webhu browser 63.0.3239.84
Google Chrome haisi yakavhurwa sosi, Chromium iri. Ndokumbirawo ugadzirise zvinyorwa kuti udzivise nyonganiso.
HaIYO yakavhurika sosi, uye hairemekedze kuvanzika